ကျောင်းသားများအဆိုအရ NETFLIX ၏လျှို့ဝှက်ကျောက်မျက် - သတင်း
ကျောင်းသားများအဆိုအရ Netflix ၏လျှို့ဝှက်ကျောက်မျက်
ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုစတင်ကတည်းကကျောင်းသားများသည်တစ်ခုထက်မကသော့ခတ်ခံရသည်။ တစ်နေကုန်အိမ်မှာတည်းခိုတာကကျွန်တော်တို့အများစုဟာ Netflix ကိုကြည့်ရှုရန်အရာများစွာကုန်သွားပြီဖြစ်သည်။ ငါရှိသည်သိတယ် ဒီအကြပ်အတည်းနှင့်ရင်ဆိုင်နေရကျနော်တို့ Netflix အပေါ် underrated ရှိုးများနှင့်ဝှက်ထားသောကျောက်မျက်သူတို့ရဲ့အကြံပြုချက်များအတွက်ဘုရင့်ကျောင်းသားများကိုစစ်တမ်းကောက်ယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးနေရာများကိုရွေးချယ်ပြီးသူတို့၏မြေကွက်နှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းထားသည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီးသမားများ၊ စိတ်မပူပါနဲ့!) ဤတွင်ကျောင်းသားများအားအမျိုးအစားအလိုက်ထိပ်တန်းရွေးစရာများရှိသည်။
Zooey Deschanel သည်စင်ကြယ်သောဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူသည်အခန်းဖော်ယောက်ျားသုံးယောက်နှင့် LA ခန်းသို့ပြောင်းသွားသည်။ Schmidt သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်အလုပ်လုပ်သောshowရာမသပ်ရပ်သောမထင်မှတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးဂျက်စ်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်း Cece (စံပြ) ပြီးနောက်အချိန်ကုန်ခံပြီးအချိန်ဖြုန်းနေသော်လည်းသူသည်အမျိုးသမီးများအတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ပြင်သစ်လက်ရွေးစင်အသင်းအတွက်ဘတ်စကက်ဘောကစားသမားဟောင်း ၀ င်းစတန်ဖြစ်သည်။ သူနှင့်အတူသူ၏အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေနှင့်ချစ်ကြိုက်သူအသစ်ဖြစ်သောကြောင်ဖာဂူဆန်ကိုရှာဖွေသည်။ ဘယ်အုပ်စုကလှောင်ပြောင်သရော်တာလဲ။
ဤမှောင်မိုက်သောဟာသသည်မက္ကဆီကိုတွင်တည်ရှိပြီးပန်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုပိုင်ဆိုင်သောအလုပ်မဖြစ်သောချမ်းသာသောမိသားစုနှင့်လိုက်ဖက်သည်။ 'The Flowers of the House' (La Casa De Las Flores) ။ Roberta (Ernesto ၏လျှို့ဝှက်မြှောင်) Ernesto ရဲ့မွေးနေ့ပါတီစဉ်အတွင်းမိမိကိုယ်ကိုသတ်သေသည့်အခါစီးရီးစတင်ထုတ်လုပ်သည်။ ဤသည်ကလျှို့ဝှက်ချက်များကိုဖွင့်ဟဖော်ထုတ်ရန်နှင့်လျှို့ဝှက်သော cabaret ၏ကြေငြာခြင်းအပါအဝင်ဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်စေမည့်ဖြစ်ရပ်များကိုစတင်ခဲ့သည်။ နောက်တစ်ခုဖြစ်သော backstabbing, scheming နှင့်မြောက်မြားစွာအရိုးစုများကိုဗီရိုများမှအပြီးသတ်ထုတ်လွှတ်မှုဖြစ်သည်။
LA ၏ Echo Park ရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်သောကျူးဘား - အမေရိကန်မိသားစုအပေါ်အဓိကထားသည့် ၁၉၇၅ sitcom ၏ပြန်လည်စတင်မှု။ မိသားစုကို Penelope, ကြင်ဖော်မဲ့မိခင်နှင့်စစ်မှုထမ်းဟောင်း PTSD ခံစားနေရပြီးမိသားစုကိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်သူနာပြုတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းသည်သူ့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူများအပေါ်အပြုသဘောထားရှိနေသည်။ သူမ၏ကလေးနှစ်ယောက်သည်လှုပ်ရှားမှုတက်ကြွလှုပ်ရှားသူအယ်လင်နာနှင့်ကျော်ကြားသောအဲလက်စ်ဖြစ်သည်။ မိသားစု၏အဓိကအချက်အချာမှာကလေးငယ်များနှင့်အတူကူညီရန်၊ သူမဆင်းလာသောအခါ Penelope ကိုကောက်ယူရန်နှင့်လူတိုင်းကိုအကန့်အသတ်မရှိစောင့်ရှောက်ရန်ကူညီပေးနေသောအဖွားလစ်ဒီယာဖြစ်သည်။ Schneider သည် Alvarez မိသားစု၏တရား ၀ င်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီးအဆောက်အ ဦး ၏အိမ်ရှင်ဖြစ်ပြီးမိသားစုညစာအတွက်အမြဲတမ်းရှိသည်။ ဤပြပွဲသည်ကျား၊ မရေးရာလက္ခဏာ၊ လိင်မှု၊ လိင်တူဆက်ဆံခြင်း၊ လိင်တူဆက်ဆံခြင်း၊ အမေရိကန်ရှိလက်တင်လူမျိုးများနေ့စဉ်နေ့တိုင်းရင်ဆိုင်ရခြင်း၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ စွဲလမ်းမှုနှင့်စိတ်ရောဂါစသည့်ပြissuesနာများစွာကိုကိုင်တွယ်သည်။ Gloria Estefan အပါအ ၀ င်လူသိများသောမျက်နှာအချို့ကိုည့်သည်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်သည်။
ကရှေ့နေသည်သူ၏ဘွဲ့ဘွဲ့အတုကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်ဂျက်ဖ် Winger နောက်ကျောကောလိပ်သို့သွားသည်။ သူကသူနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာဆက်ဆံလိုကြောင်းသူ၏စပိန်အတန်းမှကျောင်းသားတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံပြီးနောက်သူသည်လေ့လာရေးအဖွဲ့တစ်ခုကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ လူအများအပြားကိုဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်သေးငယ်သည့်အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်းအားဖြင့်လေ့လာရေးအဖွဲ့သည်စကားလုံးပျံ့နှံ့သွားသည်။ သန်းကြွယ်သူဌေး၊ ကြင်ဖော်မဲ့မိခင်၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ မူးယစ်ဆေးစွဲစွဲလမ်းသူနှင့်ယခင် quarterback ကိုဘယ်လိုရနိုင်မည်လဲ။
၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် Daniel LaRusso သည်ဂျွန်နီလောရင့် All Valley Karate ပြိုင်ပွဲတွင်အနိုင်ရခဲ့သည်။ ယခုအနှစ် ၃၀ ကြာပြီးနောက်ဂျော်နီသည်မိဂယ်လအားကလေးငယ်ကိုအနိုင်ကျင့်ခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့ပြီး Cobra Kai ကရာတေးဒိုဂျိုကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန်လှုံ့ဆော်ခံခဲ့ရသည်။ ဤသည်မှာ Johnny နှင့် Daniel တို့အကြားပြိုင်ဆိုင်မှုကိုပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မေးခွန်းမှာမည်သူသည်အဆုံးစွန်ချန်ပီယံ၏အမည်ကိုယူမည်နည်း။
၁ ။ ရှိုး
၎င်းသည် ၁၉၈၇ နယူးယောက်ဖြစ်ပြီး Ryan Murphy မှဖန်တီးခဲ့သောဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဇာတ်လမ်းသည် LGBTQ + Ballroom ယဉ်ကျေးမှုမြင်ကွင်းတွင်ပါ ၀ င်သူများ၏ဘဝနောက်သို့လိုက်သည်။ ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက် Bianca Rodriguez သည်သူမ၏ယခင်အိမ်သူအိမ်သားမိခင် Elektra ကြွယ်ဝမှုကိုမကျေမနပ်ဖြစ်စေရန်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အိမ်တစ်ခုတည်ဆောက်သည်။ Damon Richards ကိုသူ၏မိဘများကသူမလိင်ကိုချစ်သောကြောင့်သူ၏အိမ်မှအတင်းအဓမ္မခိုင်းစေခြင်းခံရသည်။ သူသည်နယူးယောက်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးသူသည် dancer ဖြစ်ရန်စိတ်ကူးခဲ့သည်။ Angel သည်ဆိပ်ခံတံတားများမှအလုပ်လုပ်သည်။ သူနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သောသူဌေးကြီးသူဌေး Stan Bowes နှင့်သူမရင်းနှီးချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုရရှိသည်။ Bianca သည် Damon နှင့် Angel တို့၏မိခင်တစ် ဦး ဖြစ်လာပြီးစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်၎င်းတို့အားစွန့်ပစ်ထားသမျှကိုယူရန်အတူတကွလုပ်ဆောင်ကြသည်။
2. Dawson ရဲ့ Creek အဘိဓါန်
ဤအနှစ် ၉၀ ကျော်သောအမေရိကန်တီဗွီဇာတ်လမ်းသည်မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်၊ ကက်စ်စ်ဒက်စ်မြို့ရှိအထက်တန်းကျောင်းနှင့်ကောလိပ်မှဂျိမ်းစ်ဗန်ဒါဘစ် (Dawson)၊ Michelle Williams (Jen)၊ Joshua Jackson (Pacey)၊ သူငယ်ချင်းလေး ဦး ၏အုပ်စုသည်အထက်တန်းကျောင်းများ၏စိန်ခေါ်မှုများ၊ ဆက်ဆံရေးအသစ်များနှင့်လက်ရှိဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခြင်း အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းအုပ်စုတစ်ခုအနေဖြင့်အချင်းချင်းမှီခိုနေသမျှကာလပတ်လုံးယင်းသည်အရာအားလုံးကိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။ ဟုတ်လား
ဂျူးအမျိုးသမီးငယ်တစ် ဦး သည်ဘရွတ်ကလင်၊ ဝီလျံစဘတ်တွင်ကြီးပြင်းလာပြီးဘ ၀ သစ်ကိုရှာဖွေရန်အတွက်ကြီးပြင်းလာသည့်သြသဒေါက်အသိုင်းအဝိုင်းမှထွက်ပြေးခဲ့သည်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောအိမ်ထောင်ရေးမှလွတ်မြောက်ပြီးနောက်သူမဘာလင်ရှိမိခင်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအသစ်နှင့်တိုးတက်သောဂီတပညာရှင်သူငယ်ချင်းများ၏အကူအညီဖြင့်ဘဝအသစ်ကိုစလေ့လာခဲ့သည်။ အက်စတီသည်သူမတောင့်တသောလွတ်လပ်မှုနှင့်စွန့်စားမှုများကိုတွေ့လိမ့်မည်လော။
Thriller / မင်းကိုသံသယ ၀ င်စေတယ်
Gillian Anderson (Stella) နှင့် Jamie Dornan (Paul Spector) တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Belfast ရှိအမှတ်တံဆိပ်လူသတ်သမားကိုလှည့်လည်။ ရှည်လျားပြီးဆံပင်အနက်ရှည်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်အမျိုးသမီးများကိုသရုပ်ဆောင်သည်။ Spector သည်တစ်နေ့တာအတွင်း ၀ မ်းနည်းပူဆွေးသောကံကြမ္မာအနေဖြင့်လူများကိုကူညီပေးသောမိသားစုလူတစ်ယောက်ဟုထင်ရသော်လည်းညအချိန်တွင်သူသည်သူ၏မှောင်မိုက်သောစိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုဖြည့်ဆည်းရန်အလွန်အမင်းကြိုးစားနေသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူ့ကိုရပ်တန့်စေနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောသူမှာအင်္ဂလိပ်ကြီးကြပ်သူ Stella Gibson ဖြစ်ပြီးသူ့ကိုဖမ်းရန်စွဲလမ်းနေသည်။ Stella က Spector အားတရားမျှတမှုရှိစေမည်လား၊
Connecticut သည် West Ham တွင်နေထိုင်သူအားလုံးလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်စွာပျောက်ကွယ်သွားပြီးနောက်ဒေသခံအထက်တန်းကျောင်းမှဆယ်ကျော်သက်အုပ်စုတစ်စုသည်ရှင်သန်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှာရပေမည်။ သူတို့အဖွဲ့သည်ကွင်းဆင်းခရီးစဉ်တွင်ရှိပြီးချမ်းသာကြွယ်ဝသောမြို့တော်သို့ပြန်လာပြီးလူတိုင်းအသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်းသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်လိုသည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ သစ်တောထူထပ်သောသစ်တောကြောင့်ပြင်ပကမ္ဘာမှဖြတ်ထုတ်ခံလိုက်ရပြီဖြစ်သောကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်များသည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာ။ ရှင်သန်ရန်လိုအပ်သောစွမ်းရည်များကိုစုဆောင်းနိုင်မည်လောသို့မဟုတ်တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်တစ်ယောက်ရွေးသွားမည်လား။
သငျသညျမတော်တဆထို့နောက်သူကမတူပဲ instagram အပေါ်တစ်ခုခုနဲ့တူပါလျှင်
ဆွီဒင်ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်သူသည်အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ် Maja Norberg ကိုလူသတ်မှုဖြင့်စွပ်စွဲခံရသည့်အဖြစ်အပျက်ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ စတော့ခ်ဟုမ်းမြို့ဆင်ခြေဖုံး၌ကျောင်းမှပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မာယာသည်သူမအားအစောပိုင်းကလူသတ်မှုကိုဝန်ခံခဲ့သည်။ သို့သော်မကြာမီသူမ၏ကာကွယ်ရေးကိုပြောင်းလဲလိုက်သည်။ ဆွီဒင်တွင်လက်ရှိအတန်းမညီမျှမှုကိုထင်ဟပ်စေရန်ဖန်တီး, ဒီပြပွဲဇာတ်လမ်းပြောပြရန်အဓိကဇာတ်ကောင်ရဲ့ရှုထောင့်နှင့် flashbacks ၏အသုံးပြုမှုကိုအသုံးပြုသည်။ Maja သည်သတ်ဖြတ်မှုကိုအဘယ်ကြောင့်ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းနှင့် Maja သည်အပြစ်မဲ့ကြည့်ရှုသူသို့မဟုတ်တိုက်ခိုက်မှု၏နောက်ကွယ်ရှိလူလားဟုတ်မဟုတ်မေးခွန်းထုတ်ရန်အမှုစစ်ဆေးမှုသည်သူ၏အာရုံပြောင်းသွားသည်။
• အဆင့် - ယခုနှစ် Netflix တွင်နံပါတ်တစ်နေရာ၌အရှည်ဆုံးသောပြပွဲများ
• Black Mirror ဖန်တီးသူ Charlie Brooker သည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်ခန့်တွင် Netflix ၏လှောင်ပြောင်မှုများကိုပြုလုပ်နေသည်
• ကျနော်တို့ဂျက် Sheppard, TikTok ပေါ်တွင်သင်၏အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေအသစ်သူဘုရင့်ကျောင်းသားနှင့်အတူ chatted